Double Queen Suite w/yokupaka kufutshane La Calzada +Wifi
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguCoco
Wamkelekile kwi-Bloom, indlela yokuphila ye-boutique kubahambi abajonge ukuchuma nokuchuma. Ipropathi yethu yangoku nesanda kulungiswa, 2500 sq ft enamagumbi amane ahlukeneyo nabucala abekwe kwikona ebukekayo ethe cwaka yaseGranada yeyona ndawo ifanelekileyo yokutsiba yohambo lwakho. Lahleka kubuhle be-rustic obunomtsalane kwizizukulwana zabahambi.
Okuqukiweyo kwindawo yakho yokungena yabucala zezi:
-Amagumbi okulala amabini aneebhedi zeQueen
- Ukupaka ngokukhuselekileyo kwemoto enye
-Igumbi lokuhlambela elinye (namanzi ashushu)
- Ikhitshi nayo yonke into oyifunayo ukupheka isidlo
-Indawo yokuhlala, kunye ne-smart TV kunye neSofabed okanye i-1 Queen blow-up umatrasi.
- Iveranda enesango
-Ipatio yokuhlamba yabucala eneWasha
-Imihla ngemihla iyachuma kulo lonke.
Hlala nathi kwaye uncede ukuxhasa uluntu lwasekuhlaleni. Uya kuba ngasecaleni kwendawo yokubhaka yasekhaya kunye namanyathelo asuka eLa Calzada, isitalato esineecafe ezincinci kunye neeresityu. Hlala apha kwaye ube phakathi kwemizuzu emi-5 yokuhamba ukuya elunxwemeni kunye nokuhamba ngemizuzu eyi-15 ukuya kwimbali yaseMbindi Park yaseGranada, iigalari zobugcisa, kunye namanye amava enkcubeko.
Ipropathi yethu eyi-2500 sq ft enamagumbi amane ahlukeneyo abekwe kwikona ebukekayo ezolileyo eGranada, kubandakanya i-5 mins ukuhamba ukuya elunxwemeni lwechibi kunye ne-15 min uhamba ukuya kwimbali yePaki yaseGranada, i-Art Galleries, kunye namanye amava enkcubeko.
IiVenkile zokutya ezikufuphi:
Umbuki zindwendwe ngu- Coco
Siyabuxabisa ubumfihlo bakho kwaye siya kukushiya kuyo. Ngalo lonke ixesha, ngaphambi nangemva kokuhlala kwakho, wamkelekile ngakumbi ukuba uqhagamshelane nathi ngefowuni/i-AirBnB imiyalezo/i-imeyile/imidiya yoluntu nangasiphi na isizathu. Ukuba ufuna umntu ukuba akuncede ngokobuqu, siya kukuvuyela ukwenza ukuhlala kwakho kube ngcono.
Siyabuxabisa ubumfihlo bakho kwaye siya kukushiya kuyo. Ngalo lonke ixesha, ngaphambi nangemva kokuhlala kwakho, wamkelekile ngakumbi ukuba uqhagamshelane nathi ngefowuni/i-AirBnB…